International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Press Release: Realities ofaWorsening Human Rights Situation Must be Addressed by the Universal Periodic Review
Press Release: Realities ofaWorsening Human Rights Situation Must be Addressed by the Universal Periodic Review
(Geneva - 8 October 2015) Today 14 civil society organisations from the Burma-Myanmar Universal Periodic Review Forum and its partner civil society organisations from Burma/Myanmar urged the Myanmar Government to uphold its human rights obligations and implement the commitments it made during the first cycle of the Universal Periodic Review (UPR) in 2011.
The delegates addressed diplomats during UPR Info's UPR Pre-Session in Geneva and urged them to make informed recommendations during this year's UPR to reflect the local voices that are critical in driving the country towardsagenuine democracy that respects and promotes human rights.
The country will be reviewed on its human rights record by UN Member States at the 23rd Working Group session on6November 2015 in Geneva, Switzerland.This second UPR cycle will include the human rights situation in the country since President Thein Sein's administration took over in 2011.
"It would be inaccurate to think the reform process initiated in 2011 has brought positive change in people's lives," said Aung Myo Min, Executive Director of Equality Myanmar and Co-Leader of the Burma-Myanmar UPR Forum. "While the economy has started to transform, this is at the cost of severe human rights violations, such as land confiscations and torture perpetrated at the hands of the military and business cronies for the advancement of development projects. We need to inform diplomats and the international community of the reality of daily lives of our people to guarantee they make informed recommendations."
While the Government agreed to ratify core international human rights treaties during the last UPR cycle, they have failed to ratify any of them since 2011. The lack of implementation of these agreements has led to systematic and persistent human rights violations that continue unabated throughout the country. The Government has failed to review and amend laws that fall short of international human rights standards, worsening conditions for human rights defenders and activists who continue to be imprisoned without fundamental rights to freedom of peaceful assembly, association and expression. In addition, the recent laws for the so-called "protection of race against religion" discriminate against religious minorities, and are further marginalising the already vulnerable Muslim communities.
Furthermore, the failure to amend the 2008 Constitution that entrenches military power in politics disenfranchises ethnic and indigenous peoples -akey stumbling block to the advancement of human rights. The continuing military offences against ethnic and indigenous peoples by the Myanmar Army has displaced over 140,000 new internally displaced persons in ethnic areas since President Thein Sein came into power, while approximately 110,000 refugees continue to live as refugees along the Thailand-Burma/Myanmar border for nearly 30 years. The systematic and widespread abuses by the Myanmar Army in ethnic areas are tantamount to war crimes and crimes against humanity, as sexual violence against ethnic women continues to be used asaweapon of war with total impunity. In addition, land confiscation and land rights related abuses worsens as the country opens up to economic opportunities, further threatening the livelihood of the people, particularly in ethnic and indigenous peoples areas.
"A backsliding of the human rights situation especially since 2013 has revealed the true nature of so-called democratic reforms in Burma," said Khin Ohmar, Coordinator of Burma Partnership and Co-Leader of the Burma-Myanmar Forum. "Ask the students imprisoned for peacefully protesting for education reform, hundreds of farmers arrested for trying to protect their land, the hundreds of thousands of displaced people in ethnic areas, or religious minorities suffering state-backed discrimination and violence if the past four years has seen an improvement in the human rights situation."
"UPR Info organises UPR Pre-Sessions in the country and in Geneva as it is critical to facilitate constructive dialogue between local human rights defenders and diplomats to ensure local voices are at the heart of the UPR: that their concerns and needs are reflected and addressed in the UPR recommendations, and most importantly that they can provide concrete solutions to improve the human rights situation on the ground," said Emilie Pradichit, Asia Regional Representative of UPR Info. "As the review of Burma/Myanmar is taking place two days before the country elections, it is hoped the recommendations would influence the human rights agenda of the upcoming government and would encourage the government to work in cooperation with civil society and all relevant stakeholders in implementing these recommendations," she continued.
The Burma-Myanmar UPR Forum, is comprised of more than 35 local human rights organisations based inside the country and along the Thailand-Burma/Myanmar border. The members of the Burma-Myanmar UPR Forum consists of civil society organisations that include former political prisoners, women leaders, youth, indigenous peoples, and sexual minorities among others. It stands by the principal of Universality of Human Rights and reflects local communities' wish for their country: an inclusive, diverse and equal society – where leaders pave the way for younger generations and empower women, and minorities are given an equal voice.
Hla Myat, Head of Colors Rainbow, the leading LGBTI rights organisation, emphasised the importance of being part of the Burma-Myanmar UPR Forum stating, "As the LGBTI Community, we are not seeking special rights, but equal rights. We no longer want to be casted as criminals by section 377 of the Penal Code. The LGBTI community has found brothers, sisters, and allies in the UPR Forum who will stand by our side and show the Burmese society that the country we want is inclusive and equal. Their support is significant as it validates our fight for legal recognition and existence and helps our struggle to be accepted and mainstreamed in society."
The "Information on the Status of the Human Rights Situation in Myanmar" consisting of 16 UPR Advocacy Factsheets provides snapshots from the second cycle UPR submissions, highlighting the human rights issues in the country. Please download the "Information on the Status of the Human Rights Situation in Myanmar" (16 UPR Advocacy Factsheets), written by members of the UPR Forum from the following link: http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/myanmar/session_23_-_november_2015/upr_advocacy_factsheets_-_myanmar2015.pdf.
ပိုမိုဆိုးရွားလာသော လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေမှန်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ပုံမှန်သုံးသပ် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးဖြေရှင်းပါ
(ဂျနီဗာ - ၈ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅) မြန်မာUPRဖိုရမ် အဖွဲ့ဝင် မြန်မာအရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း (၁၄) ဖွဲ့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် အပြည်အပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေပုံမှန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ (UPR) တွင် ပေးထားခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကတိပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့တွင် UPR Info မှ ပြုလုပ်ခဲ့သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် သံတမန်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဒေသခံပြည်သူများ၏အသံသည် လူ့အခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာမှုရှိသည့် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီသို့ တွန်းပို့ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် ယခုနှစ် UPR တွင် ဒေသခံပြည်သူများ၏အသံများကို ထင်ဟပ်ပေးနိုင်သော အကြံပြုချက်များ မြန်မာအစိုးရထံပေးရန် တောင်းဆို ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့၌ ဂျနီဗာတွင် ပြုလုပ်မည့် (၂၃) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအလုပ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်သော မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤဒုတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ UPR တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့သော ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများ အားလုံး ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
"၂၀၁၁ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်စဉ်က ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ယူဆောင်လာပေးတယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်ဟာ တိကျမှုမရှိပါဘူး။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး စတင်ပြောင်းလဲ လာချိန်မှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် စစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးသမားတွေက ကျူးလွန်နေတဲ့ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုတွေ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ စတဲ့ဆိုးရွားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာ တစ်ဖက်က ပြန်ပြီးပေးဆပ်လိုက်ရတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အစိုးရကို မှန်ကန်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေပေးနိုင် အောင် သံတမန်တွေ၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွေကို ပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ ပကတိအခြေအနေမှန်တွေကို အသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်" ဟု ညီမျှခြင်းမြန်မာ အဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြန်မာUPRဖိုရမ် တွဲဖက်ဦးဆောင်သူ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် အဓိကကျသော နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးစာချုပ်များကို တရားဝင်အတည်ပြုပါမည်ဟု ယခင် UPR တွင် သဘောတူခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ၍ အားလုံးကို တရားဝင်အတည်ပြုရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတဝန်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သည့် ကျူးလွန်မှုများ စနစ်တကျနှင့် စဉ်ဆက်မပျက် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော ပြည်တွင်းဥပဒေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် သင်းပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်များကဲ့သို့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးနေရပြီး လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်သူများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများမှာလည်း ဆက်လက်အကျဉ်းကျခံနေရခြင်းကြောင့် အခြေအနေမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာနေလျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် ဘာသာရေးလူနည်းစုများကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြုထားသော မကြာသေးမီက အတည်ပြုခဲ့သည့် အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေများသည် ကာကွယ်မှုနည်းနေပြီးသားဖြစ်သော မွတ်ဆလင်လူထုအသိုင်းအဝိုင်းကို ထပ်မံကန့်သတ်ခွဲခြားရာ ရောက်ပါသည်။
ထို့ပြင် စစ်တပ်၏ နိုင်ငံရေးအာဏာကို အမြတ်တွယ်နေစေသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ငြင်းပယ်ထားခြင်း ပင်ဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်လာရေးအတွက် အဓိကကျသော အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှစ၍ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသား များအပေါ် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ပြည်တွင်းအိုးအိမ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူပေါင်း (၁၄၀၀၀၀) ကျော် ထပ်တိုးလာခဲ့ပြီး ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စစ်တစ်လျောက်တွင်လည်း ဒုက္ခသည်ပြည်သူပေါင်း (၁၁၀၀၀၀) ခန့် ဆက်လက် နေထိုင်လာခဲ့သည်မျာ နှစ်ပေါင်း (၃၀) နီးပါး ရှိပြီဖြစ်သည်။
အပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်အပြည့်အဝဖြင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စနစ်တကျ နှင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် တိုင်ရင်းသားအမျိုးသမီးများအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကို စစ်လက်နက်သဖွယ် ဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ရာမြောက်ပါသည်။ ထို့ပြင် တိုင်းပြည်တွင်း စီးပွားရေးအခွင့် အလမ်းများပွင့်လာသည်နှင့် တစ်ချိန်ထဲတွင် မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများနှင့် လယ်ယာမြေနှင့်စပ်လျဉ်းသော အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာနေလျက်ရှိပြီး ပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ဒေသများတွင် ပိုမိုချိန်းခြောက်လာနေလျက်ရှိသည်။
"၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက နောက်ကြောင်းပြန် ဆိုးရွားလာတဲ့လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အများကပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာရဲ့ တကယ့်အနှစ်သာရကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်မှုရှိလာသလားဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြလို့ အကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေ၊ ကိုယ့်မြေကိုကာကွယ်ရင်းအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ရာနဲ့ချီတဲ့လယ်သမားတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေက သိန်းနဲ့ချီတဲ့ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ ခွဲခြားဆံဆက်မှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကြုံနေရတဲ့ ဘာသာရေးလူနည်းစုတွေ၊ သူတို့တွေကိုမေးကြည့်ပါ" ဟု မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ အဖွဲ့ တာဝန်ခံ၊ မြန်မာUPRဖိုရမ် ပူးတွဲဦးဆောင်သူ ခင်ဥမ္မာ မှပြောသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ခြင်းနှင့် တရားရေးအရပြန်လည်ကုစားပေးခြင်း ဖော်ဆောင်ပေးရန် ထိရောက်မှုနှင့် လွတ်လပ် အမှီအခိုကင်းသော အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မရှိသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ သက်ဆိုင်သူများကို အောက်ခြေရှိလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများအား တိကျစွာတင်ပြနိုင်ရန် UPR ဖိုရမ်သည် အရေးကြီးသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် UPR ဖြစ်စဉ်တစ်လျောက် တိကျသောဖြေရှင်းနည်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
"ဒေသခံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ စိုးရိမ်မှုတွေ UPR မှာ ထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်သွားပြီး အစိုးရကိုဝိုင်းပေးတဲ့ အကြံပြုချက် တွေထဲထိ ပါသွားအောင် အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူ တွေနဲ့သံတမန်တွေရဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အတွက် UPR အကြိုဆွေးနွေးပွဲတွေကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာ ရော ဂျနီဗာမှာပါပြုလုပ်နိုင်ဖို့ UPR Info က စီစဉ်ပေးပါတယ်။ UPR မှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေကို ရွေးကောက်ပွဲရက် မတိုင်ခင် (၂) ရက်အလိုမှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အကြံပြုချက်တွေဟာ နောက်တက်လာမယ့် အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအစီအစဉ်တွေအပေါ် လွမ်းမိုမှုရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်" ဟု UPR Info ရဲ့ အာရှဒေသကိုယ်စားလှယ် အမ်မလီပရာဒစ်ချစ် မှပြောသည်။
မြန်မာUPRဖိုရမ် တွင်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသော မြန်မာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၃၅) ဖွဲ့ ကျော် ပါဝင်ပြီး ညီမျှခြင်းမြန်မာ နှင့် မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ အဖွဲ့တို့က ကမကထပြုဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မြန်မာUPRဖိုရမ် အဖွဲ့ဝင်များထဲတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ၊ လူယ်များ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့် လိင်စိတ်ကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံသောလူနည်းစုများ စသည်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည်။ မြန်မာUPRဖိုရမ် တွင် "လူ့အခွင့်အရေးသည်အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်" ဟူသောမူကို စွဲကိုင်ထားပြီး ခေါင်းဆောင်များက မျိုးဆက်သစ်များအတွက် လမ်းဖယ်ပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ လူနည်းစုများ၏အသံကို တန်းတူထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် အများပါဝင်မှု၊ မတူကွဲပြားမှုနှင့် တန်းတူညီမျှမှုရှိသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပေါ်လာရေး မျှော်မှန်းချက်အပေါ် ထင်ဟပ်စေသည်။
"LGBTI လူထုအနေနဲ့ အခွင့်ထူးတွေ တောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ တန်းတူအခွင့်အရေးကို တောင်းနေတာပါ။ ကျွတော်တို့အနေနဲ့ ပုဒ်မ ၃၇၇ အောက်မှာ တရားခံတွေအနေနဲ့ အရေးယူခံရတာတွေကို မလိုချင်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရပ်တည်ပေးပြီး LGBTI လူထုအနေနဲ့ အများပါဝင်မှုနဲ့တန်းတူညီမှုရှိတဲ့တိုင်းပြည် လိုချင်တယ် ဆိုတာကို မြန်မာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းမြင်လာအောင် ပြသပေးမယ့် မြန်မာUPRဖိုရမ် ကညီအကိုမောင်နှမတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိထားပါပြီ။ သူတို့ဆီကထောက်ခံမှုတွေ အများကြီးရှိတာဟာ ပကတိဖြစ်တည်မှုနဲ့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိရေးအတွက် တောင်းဆိုနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကို စစ်မှန်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြုပေးပြီး လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံလိုက်နာပေးလာအောင် ကြိုးစားရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်" ဟု Colors Rainbow အဖွဲ့၏ ဦးဆောင်သူ ကိုလှမြတ်က ပြောသည်။
အောင်မျိုးမင်း (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) အီးမေးလ် - myominburma@gmail.com ဖုန်း - +41 (0)1767713553 (ဂျနီဗာ)
ခင်ဥမ္မာ (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) အီးမေးလ် - khinohmar@burmapartnership.org ဖုန်း +41 (0)767713551 (ဂျနီဗာ)
"Information on the Status of the Human Rights Situation in Myanmar" စာတမ်းတွင် အကြောင်းအရာအချက်အလက်အကျဉ်းချုပ် (၁၆) ခုပါဝင်ပြီး တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ် UPR သို့ မြန်မာ UPR ဖိုရမ်က တင်သွင်းခဲ့သော အစီရင်ခံစာပါ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအလိုက် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းအရာများကို မီးမောင်းထိုး ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာ UPR ဖိုရမ်မှ ရေးသားထားသော အချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်ကို အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/myanmar/session_23_-_november_2015/upr_advocacy_factsheets_-_myanmar2015.pdf